Condos Ho amidy sy manofa in Calpica Itacumbú, Artigas
Ny condominium, matetika nohafohezina amin'ny condo, dia karazana trano iray mizara ho tokana maromaro izay samy manana azy manokana, voahodidin'ny faritra iraisana. Ny condominiums mipetraka amin'ny trano dia aorina matetika toy ny tranobe an-trano, saingy nisy ny fitomboan'ny isan'ny "condominiums nitazona", izay toa trano an-tokantrano tokana nefa any amin'ireo toerana misy azy, ny tranokala, fananganana tranobe, ary ny arabe dia iarahany sy iarahan'ny iray avy hatrany fiaraha-monina. Tsy toa ny trano fonenana, izay manofa trano, ny tranokala condominium. Ankoatr'izay, ny tompon'ny vondrona tsirairay dia manangona ireo faritra iraisana amin'ny fananana, toy ny lalantsara, lalambe, efitrano fidiovana, sns.; ary koa ny fitaovana sy kojakoja mahazatra, toy ny rafitra HVAC, mpanangana, sy ny sisa. Ny toeram-pivarotana maro dia ny condominia indostrialy izay ny toeram-pivarotana sy ny birao manokana dia fananan'ny orinasam-barotra izay mitrandraka azy ireo, fa ny faritra mahazatra amin'ny toeram-pivarotana kosa dia fananan'ny orinasan'orinasa manokana izay tompon'ny sehatra tsirairay.